HomeWararka CiyaarahaChelsea oo ku Fashilantay Xidiga badali lahaa Booska Haaland loo qorsheeyay
July 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea ayaa dhabar-baaxo kala kulantay xidiga lala xiriirinayo ee asa Kalajdzic ayaa dharbaaxo.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Austria ayaa loo maleynayaa inuu ku jiro liiska kooxda Chelsea ee beddelka u noqon karta Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland , iyadoo Blues ay u badan tahay inay xagaagan ku dooneyso ciyaaryahanka reer Norway.
Kalajdzic heshiiskiisii ​​hore ee Stuttgart wuxuu haatan dhacayaa wax kayar laba sano, laakiin weeraryahanka ayaa qiyaasaya inuu sii joogi doono kooxda Bundesliga muddo dheer.
Kalajdzic oo la hadlaya Kleine Zeitung ayaa yidhi: “Dabcan, waxaan qiyaasi karaa in aan kordhin doono qandaraaskayga.
“Waxyaabaha ay tahay inay yimaadaan waan arki doonnaa. Haddii ay jiraan wax run ahaantii aad ii cajabinaya, halkaan ku idhaahdo waxaan doonayaa inaan sameeyo, markaas waan sameyn doonaa.
“Waan dabacsanahay. Runtii kama fikiro wax badan, halkan ayaan imika jooga, aniga oo la baashaalaya saaxiibaday iskuna dayaya in aan isku diyaariyo kulan kasta oo tababar ah.”
Kalajdzic ayaa dhaliyay 16 gool wuxuuna caawiyay lix kale Stuttgart xilli ciyaareedkii 2020-21 Bundesliga wuxuuna dhaliyay gool xusuus leh kulankii Italy intii lagu gudajiray wareega bug baxa ee Euro 2020.